Ithegi: umgcini wempahla | Martech Zone
Ithegi: umphathi wehostgator
NgoLwesibini, Juni 28, 2016 NgoLwesibini, Juni 28, 2016 Douglas Karr
Ngale ntsasa sifowunelwa ngumthengi. Sisebenze nabo ukwenza indawo entsha okwethutyana, kodwa yonke into yayi-offline ngoku. Umcimbi we-DNS wolunye uhlobo. Umntu wabo we-IT usitsalele umnxeba ukuze abone ukuba sitshintshe nantoni na. Besingenalo kodwa sihlala sikuthiyile ukuva ngezi ngxaki kwaye sifuna ukubanceda basombulule umba. Ngamanye amaxesha iyinto elula njengokufaka ikhadi lamatyala elidala
Le infographic evela kwi-Hostgator igxuma ijikeleze phakathi kwentengiso kunye nokwazisa, izixhobo kunye neziganeko zokwenyani zentengiso yedijithali. I-SEO sisicwangciso-qhinga, kodwa i-Analytics ayisosicwangciso-sisixhobo sokunceda ukumisela iqhinga. Intengiso ehlawulelweyo iyinxalenye yesicwangciso sisonke kodwa ayisosicwangciso ngaphakathi kwayo. Kwaye uguquko ayisosicwangciso, sisiphumo seqhinga. Uhlobo olungaqhelekanga ngendlela abayifaka ngayo, kodwa kukho ezinye izixhobo, i-tidbits,